Ndzɛmba a wodzii kan boaboaa ano no na wɔtoo no dzin Bota a Ɔsom Bo Mapa no, Elder Franklin D. Richards na ɔyɛe wɔ afe 1851 mu, dɛm aber no nna ɔyɛ Abaguafo Duebien no mu kor, na ɔyɛ president so a ɔhwɛ Ngyiresiman mu Asɛmpakã dwumadzi no do. Botae a nna osi enyido ma wɔdze yɛɛ iyi nye dɛ, wɔbɛma aber biara ndzɛmba etsitsir a wɔkenkan a no ho yɛ na ayɛ krado wɔ hɔ a wobotum dze amema nkorɔfo a nna wɔwɔ Joseph Smith n’aber do no. Nkyii, ber a Asɔrmba no dɔree wɔ Europe na America aman mu no, okehiaa dɛ wɔma nsa kã dɛm ndzɛmba yinom. Ɔnam President a Odzi Kan no, na n’Apamfo hɔn mbɔdzembɔ do ma Bota a Ɔsom Bo Mapã yi, wiadze mfɛndzanan ehyiadzi bi a wɔyɛɛ no Salt Lake City no, ɔbɛyɛɛ kyerɛwsɛm a wɔagye ato mu wɔ Asɔr no mu no mu kor wɔ Ɔbɛsɛ 10, 1880 mu.
Wɔayɛ nsɛm no mu nhwehwɛmu mpɛn pii ma wɔdze nsɛm no bi a Asɔr no hia no akã ho. Afe 1878 mu no Moses nwoma mu nsɛm no mu bi a ber a wotsintsiim nwoma no ahyɛse no nna ɔnnkã ho no wɔdze kãa ho. Afe 1902 mu no Bota a Ɔsom Bo Mapã no mu nsɛm no bi a nna wɔakã na wɔasan akã no bio na woetsintsim wɔ Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi mu no, woyii fii mu. Wɔrehyehyɛ nwoma no wɔ etsir na nkyekyɛmu mu no, na wɔdze nsɛm no ne nkyerɛkyerɛmu ahyehyɛ ase no, wɔyɛɛ no 1902 mu. 1921 mu na wodzii kan kyekyɛɛ nkrataafa no mu ebien ebien tsintsiim nsɛm no na wɔdze nkyerɛkyerɛmu nsɛm so kãa ho. Wɔannsesã biribiara bio dze kesii Ebɔbira 1976 mu, a wɔdze nyikyerɛ ebien kãa ho. 1979 mu woyii dɛm nsɛm ebien yinom fii Bota a Ɔsom Bo Mapa no mu na wɔdze kɛhyɛɛ Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi no mu, ɔno na seseiara yehu wɔ afã 137 na 138 no. Seseiara dza woetsintsim no wɔayɛ nsakyer bi wɔ mu ma ɔnye dza wodzii kan tsintsimii no asaa.
Dza odzi do yi nye mbueienyi tsiabaa wɔ nwoma a ɔwɔ hɔ seseiara yi mu:
Moses Nwoma no mu Nyiyimu. Nsɛm bi a woyii fii Genesis mu, Joseph Smith ne Bible nkyerɛase no mu, dza ɔhyɛɛ ase wɔ Obiradzi 1830.
Abraham Nwoma no. Ɔsor nkenyan nkyerɛase bi a woyii fii Abraham ne nkyerɛwee mu. Joseph Smith hyɛɛ nkyerɛase no ase wɔ 1835 mu ber a ne nsa kãa Egyptfo hɔn papyri mu bi no. Nkyerɛase no wɔdze puee guado esiado esiado wɔ Times and Seasons mu, wɔhyɛɛ ase fii Ebɔw 1, 1842 wɔ Nauvoo, Illinois.
Joseph Smith—Matthew. Nsɛm bi a woyii fii Matthew ne dasegye mu a ɔwɔ Joseph Smith ne Bible nkyerɛase no mu (hwɛ Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 45:60–61, ber a onyaa mbrasɛm fi Nyame hɔ dɛ ɔnhyɛ ase nkyerɛ Ahyɛmu Fofor no ase).
Joseph Smith—Abakɔsɛm. Nsɛm bi a woyii fii Joseph Smith ne dasegye na abakɔsɛm mu, dza ɔno na n’akyerɛwfo hyehyɛɛ no wɔ 1838–1839 mu a wɔdze puee guado esiado esiado wɔ Times and Seasons mu wɔ Nauvoo, Illinois, wɔhyɛɛ ase wɔ Ebɔw 15, 1842.
Gyedzi Ho Nsɛmpɔw a ɔwɔ Jesus Christ N’Asɔr a ɔwɔ hɔ ma Nda a Odzi Ekyir Ahotseweefo no mu. Nsɛm a Joseph Smith dze puee guado wɔ Times and Seasons mu wɔ Ebɔw 1, 1842, nye Asɔr no ho abakɔsɛm tsiabaa bi so, dza dodowara frɛ no Wentworth Krataa no.